गौतम र पोखरलेबीच दूरी घटेकै हो ? | My News Nepal
२०७६ साउन २३ गते
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र राजनीतिक कार्यदिशालाई लिएर विवाद भइरहेका बेला दोस्रो तहका नेताहरू एक ठाउँमा आउन थालेका छन् । विशेष गरेर पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीहरूबीच सीमा रेखा देखिएको छ । माओवादी पृष्ठभूमि भएका नेताहरूभन्दा पनि पूर्वएमालेका नेताहरू एक ठाउँमा बस्न खोजेका छन् ।
नेकपा सचिवालय सदस्यद्वय वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलबीच दूरी घटेको छ । लामो समयदेखि उनीहरूबीच तितो सम्बन्ध थियो । गौतम जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षमा उभिएपछि पोखरेलसँगको सम्बन्ध घटेको छ ।
गौतम जबजको पक्षमा छन् । उनले राजनीतिक अर्थशास्त्रमा जनताको बहुदलीय जनवादले थपेको योगदानको नाम रहेको बताएका छन् । क्रमिक आर्थिक विकास र त्यस्तै वैज्ञानिक समाजवादमा जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा गौतम छन् ।
पोखरेल निकट केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पनि गौतम र पोखरेलबीच जबजमा विचार मिलेको स्वीकार गरेका छन् । ‘उहाँ सन्तुलनकारी विचारभन्दा बढी प्रायः हाइजम्प, लङ्जम्प र ट्रिपलजम्प हान्नुहुन्छ र पो ! त्यसैकारण कहिले जबज विश्व ब्रह्माण्डभरि लागू हुन्छ त कहिले अब समाजवाद नै हो, जबजको काम छैन भनेको सुन्न सकिन्छ’, थापाले भनेका छन् ।
‘यसपालि सन्तुलित व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘कतिपय असहमतिका बाबजुद सही विचारलाई त सही नै भन्नुप¥यो नि ।’ थापा कुनै बेला गौतम निकट मानिन्थे । गौतमसँग विवाद परेपछि थापा पोखरेल निकट भएका हुन् ।
गौतम र पोखरेलबीच विगतमा पनि आपसी सम्बन्धका अनेक आरोह अवरोह छन् । ६५ सालमा बुटवलमा भएको पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा यी दुवै नेताहरू केपी शर्मा ओलीविरुद्ध थिए । उनीहरूले झलनाथ खनाललाई जिताएका थिए ।
गौतम त्यसबेला उपाध्यक्ष र पोखरेल महासचिव जित्न समेत सफल भएका थिए । त्यसपछिका दिनमा भने गौतम र पोखरेल एकै ठाउँमा रहेपनि विचारमा फरक धारमा थिए । पोखरेल माओवादीप्रति अनुदार बने भने गौतम निकट भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध माओवादीले सञ्चालन गरेको आन्दोलनका पक्षमा उभिँदै गौतमले एमालेका ६५ नेताहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर नेपालको राजीनामा माग गरेका थिए । पोखरेल भने नेपाल नेतृत्वको सरकारको बचाउमा लागेका थिए ।
पार्टीको ९ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा यी दुई नेता खनाल समूह छाडेर ओली समूहमा थिए । दुवै नेताहरू माधव नेपालविरुद्ध ओलीका पक्षमा लागेका थिए । यसपटक पनि ओलीलाई अध्यक्ष जिताउन उनीहरु सफल भए । सोही महाधिवेशनबाट गौतम उपाध्यक्ष र पोखरेल फेरि महासचिव चुनिएका थिए ।
पछिल्लो समयमा गौतम र पोखरेलको सम्बन्धमा चिसो बढेको थियो । अहिले गौतम ओलीसँग छैनन् । पोखरेल ओली समूहमै छन् । जनताको बहुदलीय जनवादबारे दुई नेताका समान विचार बाहिर आएपछि भने उनीहरुबीच दूरी घटेको स्पष्ट भएको छ । ‘जबज’को पक्षमा एमाले पृष्ठभूमि भएका नेताहरू एक ठाउँमा आउने प्रयासमा छन् । तर, माओवादी पृष्ठभूमि भएका नेताहरू ‘जबज’को विपक्षमा छन् । यी कारणले पुनः एमाले नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने माध्यम बनेको छ । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )